ဒေါနမြေမှအညတရခရီးသည်: November 2009
ကရင်ရိုးရာကောက်သစ်စားပွဲနှင့် ဖှီ့ဗူးယော်(ဖီ့ဗူးယ၀်) ပူဇော်ပွဲ အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ကရင်အမျိုးသားတိုင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက်လက်လှမ်းမှီရာ တတ်နိုင်သမျှရှာဖွေ စုဆောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
ကရင်လူမျိုးတို့ ၏ ရှေးဘိုးဘွားဘီဘင်များသည် ၀ိညာဉ်ကိုယုံကြည်ကြသည်။ ၀ိညာဉ်လိပ်ပြာသည် လူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပူးကပ်မှီတွယ်နေပြီး လိပ်ပျြာနှင့်အတူရှိသောသူသည် ကျန်းမာသည်၊ သန်စွမ်းသည်၊ စိတ်ဓါတ်ကြံခိုင်မှူရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။
ထို့ အတူ သစ်ပင် သီးနှံတို့ တွင်လည်း ၎င်းတို့ ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောဝိညာဉ်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့် အပင်တို့ ကိုစောင့်ရှောက်သော နတ်ဟုဆိုနိုင်သော ရုက္ခစိုးနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြ သည်။ ထိုနည်းအတူ တောင်ယာတွင် တောင်ယာကို စောင့်ရှောက်သောနတ်၊ လယ်မြေကို စောင့်ရှောက်သောနတ်များအပြင် လူနေအိမ်တွင် အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်သောနတ်ဟူ၍ ရှိသည်ကို ယုံကြည်ကြသည်။
ထိုယုံကြည်မှူများကြောင့်ကရင်လူမျိုးတို့ တွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောပွဲတော်၊ ရိုးရာဓလေ့ပွဲတော် အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ၎င်းရိုးရာဓလေ့ပွဲတော်များမှာ-----
(၁၁) ရွာလုံးကျွတ်လိပ်ပြာခေါ်ပွဲတော် (ခေါ်)၀ါခေါင်လချည်ဖြူပွဲ မင်္ဂလာပွဲတော်၊
(၁၃) နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် စသည်ဖြင့် ပွဲတော်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ သူ့ အချိန်အခါနှင့်သူ သူ့ နေရာ၊နှင့်သူ ပုံစံအမျိုးမျိုးကျင်းပကြသည်။
ဖီ့ဗူးယော်အား ရိုးရာပွဲဇော်ပွဲတစ်ရပ်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခြင်း
ကရင်လူမျိုးတို့ သည် စပါးကိုစောင့်ရှောက်သော စပါးလိပ်ပြာ (သို့ ) စပါးစောင့်နတ် (ဖီ့ဗူးယော်) ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဖီ့ဗူးယော်ကို ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်စပါးသည် ပျက်စီးလေလွင့်မှုနည်းပါးပြီး ပိုမို၍အထွက်တိုး၏။ ရှိပြီးသားစပါးတို့ သည်လည်း စားသုံးမှုအစဉ်လုံလောက်ပြီး မသိမသာတိုးပွားမြဲဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြ၏။ ထိုယုံကြည်ချက်အရ ဖီ့ဗူးယော်ကို ရိုသေသမှုပြုသောအားဖြင့် ရိုးရာပူဇော်ပွဲတစ်ရပ်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပကြသည်။
ကရင်လူမျိုးတို့ သည် လယ်ယာမြေထွန်ယက်ပြီး၍ စိုက်ပျိုးရန်သင့်မြတ်သော ရက်မြတ်သို့ ရောက်လာလျှင် ဦးစွာလယ်မြေ ကွက်၏ဒေါင့်စွန်းတို့ ၌ စပါးပင်(၇)ပင် (သို့ ) မျိုးကောက်ချက်(၇)ချက်ကို စိုက်ထားရသည်။၎င်းစိုက်ထားသော စပါးပင်များကို ကျွဲနွားတိရိစ>ာန် များမဖျက်ဆီးနိုင်အောင်ကောင်းစွာကာရန်ထားကြသည်။၎င်းဖီ့ဗူးယော်စပါးစိုက်ပြီးမှသာကျန်လယ်မြေကွက်ကိုဆက်လက်စိုက်ပျိုးကြသည်၊၊အကယ်၍ရက်ကောင်းမြတ်နေ့ တွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန်အခြေအနေမပေးပါကစတိသဘောဖြင့်ဖီ့ဗူးယော်စပါးကိုစိုက်ပျိုးထားကြသည်။နောင်အဆင်ပြေးသောအချိန်မှသာကျန်သောလယ်ကွက်ကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။၎င်းပြုလုပ်ချက်ကိုကရင်လူမျိုးတို့ ကလောင်းဆိုက်ခွတ်(လင်ဆိက်ခေါဟ်)ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။အချိန်တန်၍စပါးရင့်မှည့်ချိန်ရောက်သောအခါတွင်လည်းစပါးကွက်များကိုဦးစွာရိတ်ပြီးစပါးစည်းများက်ိုတလင်းတွင်စုပုံထားကြသည်။စပါးစည်များတလင်းသို့ အားလုံးစုံပုံပြီးမှသာဖီ့ဗူးယော်စပါးကိုပြန်ရိတ်ရသည်။ဖီဗူးယော်စပါးကိုရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါစုစည်းပြီးဝါးကိုင်း၏ထိပ်ဖျားတွင်ချည်နှောက်ကာတွဲလွဲချထားရသည်။(၀ါးကိုင်းကိုထိပ်ဖျားအရွက်အခက်များချန်းလှပ်ပြီး၊အရင်ပ်ိုင်းအရွက်အခက်များချန်းလှပ်ပြီးအရင်ပိုင်းအရွက်အခက်များကိုသပ်ချပ်ရသည်)၎င်းအပြင့်ယက်ထားသော
ကရင်လူမျိုးတို့ သည် မိရိုဖလာ တောင်ယာလုပ်ငန်းများဖြင့် ၊ ရှေးဦးမဆွကပင် လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုခဲ့ကြသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းများမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် သီးဦးသီးဖျားများဖြင့် ရိုးရာကောက်သစ်စားပွဲကို ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ သို့ သော် ကရင်လူမျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရေကြည်ရာမြက်။နုရာရောက်လာကြသည့်အခါ ရေမြေဒေသ ခြားနားစွာနေထိုင်မှု ခေတ်အဆက်ဆက် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရသော ခရီးကြမ်းတို့ ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နီးစပ်မှုနှင့် ဘာသာယုံကြည်မှုကိုနွယ်၍ ကောက်သစ်စားပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့ ရက်များ ကွဲပြားလာခဲ့ကြသည်။ဒေသအလိုက် ကောက်သစ် စားပွဲတော် ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိသော နေ့ ရက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁) မိရိုးဖလာကို ကိုးကွယ်သော တောင်ပေါ်ဒေသနေ ကရင်တို့ သည် တစ်နှစ်တာ တောင်ယာလုပ်ငန်းပြီးစီး၍ အရိုးကောက်ပွဲများ ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ကျင်းပလေ့ရှိခြင်း။
(၂) ကရင်ပြည်နယ် ဖါးအံနှစ်ခြားဒေသရှိ လဲကယ်ဘာသာဝင် ကရင်တို့ သည် နယုန်လအတွင်း ပထမအပတ် စနေနေ့ (မူထုန်း)တွင် ကျင်းပလေ့ရှိခြင်း။
(၃) ကရင်ပြည်နယ် ဖါးအံဒုံရင်းဒေသရှိ လဲကယ်ဘာသာဝင်ကရင်တို့ သည် တန်ဆောင်မုန်းလ ပထမအပတ် စနေနေ့ (မူထုတ်)တွင် ကျင်းပလေ့ရှိခြင်း။
(၄) မြေပြန့် ဒေသနေ ကရင်အချို့ နှင့် ထိုင်း(ယိုးဒယား)ရှိ ကရင်အချို့ တို့ က ပြာသိုလဆန်း တစ်ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပလေ့ရှိခြင်း။
(၅) ကရင်ပြည်နယ် တလာကူရသေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချို့ က တပေါင်းလပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပလေ့ရှိခြင်း။
စသည်ဖြင့် ဘာသာယုံကြည်မှုအရ ကွဲပြားလေ့ရှိကြသည်။ သို့ သော် ရိုးရာကောက်သစ်စားပွဲတော်နှင့်အတူ ဖီ့ဗူးယော်ပူဇော်ပွဲကို ယှဉ်တွဲလျက်ကျင်းပလေ့ရှိကြသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ဟန် အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိသော်လည်း ရည်ရည်ချက်ကား အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ကရင်လူမျိုးတို့ သည် ရိုးရာကောက်သစ်စားပွဲတော်၌ နောဟ်ပွဲ(ခေါ်) နပန်းပွဲ လက်ဝှေ့ ပွဲ ၊ သြပွဲများဖြင့် အင်အားပြ၊ သတ္တိပြ၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းမှုကို ပြသောယှဉ်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပကြုသည်။
ရိုးရာကောက်သစ်စားပွဲ (အင်းလင်ဗူးသင့်ခေါဟ်) နှင့်အတူ ဖီ့ဗူးယော်အား ပူဇော်ပွဲကို ပျော်ရွင်စွာ ဆင်ယင်ကျင်းပပြီးနောက် တလင်းရှိစပါးများကို စပါးကျီသို့ထည့်သွင်းရလေသည်။ ကျေးရွာအလိုက်အများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စပါးကျီ (သို့ ) ရွာပိုင်းစပါးကျီကို သင့်လျော်သည့်နေရာတွင် သတ်မှတ်ဆောက်လုပ်ထားကြသည်။ စပါးကျီတွင်းသို့စပါးအားလုံးထည့်သွင်း ပြီးမှသာလျှင် ဖီ့ဗူးယော်စပါး၊ ၎င်း၏ မျိုးစေ့ဥ (အ်ုခီု့ ) ဖြစ်သော မြေစာလုံးခဲတစ်လုံးနှင့် ၎င်းအား ပူဇော်ပသထားသော ပုလိုင်းငယ်တို့ ကို စပါးကျီ၏အပေါ်ထောင့် တစ်နေရာတွင် တင်ထားပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖီ့ဗူးယော်ကိုယ်စား စပါးကျီကို စောင့်ရှောက်စေလသည်။အချို့ မှာ ဖီ့ဗူးယော်တိုင်ထိတ်တွင် ဖီ့ဗူးယော်ကိုယ်စား သိန်းငှက်ိရုပ်ပြုလုပ်ချိတ်ဆွဲထားကြသည်။ သိန်းငှက်ရုပ်ရှိုခြင်းဖြင့် ကြွက်၊ ငှက် ၊ ကြက်များ စပါးကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးမှုကို ကာကွယ်သည်။ သိန်းငှက်ကကြွက်၊ ငှက် ၊ကြက်များကို ထိုးသုတ်ချီယူ စားသောက်ခြင်းအားဖြင့် စပါးကိုဖျက်ဆီးသည့်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ သိန်းငှက်ရုပ်ကို ချိတ်ဆွဲကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ဖီ့ဗူးယော် ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပသည့်အခါ ဖီ့ဗူးယော်အား ပြန်လည်ပိုိ့ဆောင်သောအားဖြင့် လူစုလူဝေးများ တန်းစီပြီး အိုးစည်၊ ဖါးစည်များဖြင့် တပျော်တပါးပို့ ဆောင်ကြပြီး ပျော်ပွဲရ္နင်ပွဲတစ်ရပ်အဖြစ် ကျင်းပကြသည်ကို တွေ့ ရပေသည်။
ဖီ့ဗူးယော်ပူဇော်ပွဲကို နှစ်သစ်ကူးနေ့ နံက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ နံနက်နေအာရုံတက်ချိန်တွင် ကရင်အမျိုးသားအလံတော်အား လွင့်ထူခြင်း၊ နှစ်သစ်ကူးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းများ ပြီးနောက် ဖီ့ဗူးယော်ပူဇော်ပွဲကို တစ်ဆက်တည်းကျင်ပကြသည်။ ဖီ့ဗူးယော်ပူဇော်ပွဲပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားအစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပွဲတော်အကြီးအမှူး (၁)ဦးနှင့်အရန်(၂)ဦးတို့ က၊ ရာဇမတ်ဝင်းအတွင်းသို့စတင်နေရာယူခြင်း။
နေ့ (၇)နေ့ စုံသော အဖိုး (၇)ဦးနှင့် အဖွား (၇)ဦးတို့ က မြေငယ်များခြံရန်လျက် နေရာယူခြင်း။
ပွဲတော်အကြီးအမှူးမှစပါးလိပ်ပြာများအသီးသီးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာစေရန်နှင့် ဖီ့ဗူးယော်အား မှာတမ်းချွေသောအားဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း။
ပွဲတော်အကြီးအမှူးက ဦးဆောင်လျက် အဖိုးအဖွားနှင့် မြေးငယ်များအားလုံး ရာဇမတ်ဝင်းအတွင်းမှ ပြန်လည်ထွက်ခွါခြင်း။
အထက်ပါအခမ်းအနားအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပွဲတော်အကြီးအမှူးများနေရာယူအပြီးတွင် နေ့ (၇)နေ့ စုံသော အဖိုး(၇)ဦးနှင့်အဖွား(၇)ဦးတို့ သည် မြေးငယ်များက ခြံရံလိုက်ပါလျက် ရာဇမတ်ဝင်းအတွင်းသို့ဆက်လက်နေရာယူကြသည်။ ရာဇမတ်ဝင်းအတွင်းရှိ စပါးပုံအား လက်ယာရစ် ဖြင့် (၃)ပတ်တိတိလှည့်ပတ်ပူဇော်ပြီးနောက် စပါးပုံ၏ လက်ယာဘက်တွင် အဖိုး(၇)ဦးကလည်းကောင်း၊ လက်ဝဲဘက်တွင် အဖွား(၇)ဦးကလည်းကောင်း ၊ နေ့ နာမ်အလိုက်အသီးသီးနေရာယူကြသည်။ မြေးငယ်များက အဖိုးအဖွား၏ နောက်၌ နေရာယူကြသည်။ထိုသို့ နေရာယူပြီးချိန်တွင် ပွဲတော်အကြီးအမှူးသည် စပါးလိပ်ပြာများအသီးသီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာစေရန်နှင့် ဖီ့ဗူးယော်အား မှာတမ်းချွေသောအားဖြင့် ကရင်ဘာသာဖြင့် စတင်၍ ရွတ်ပါသည်။ ပွဲတော်အကြီးအမှူးရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်း ပြီးဆုံးသည့်အခါတွင် အဖိုးအဖွားများက စပါးပုံအား အမွှေးနံသာရည်များ ပက်ဖြန်းကြပြီး မြေးငယ်များက ပေါက်ပေါက်ဆုပ်များ ကြဲပက်ကြသည်။ ပြီးနောက် ပွဲတော်အကြီးအမှူးက ရှေ့ဦးမှ ဦးဆောင်ပြီး အဖိုးအဖွားနှင့်မြေးငယ်များတို့ နောက်မှ ခြံရံလိုက်ပါလျက် ရာဇမတ်ဝင်းအတွင်းမှ အသီးသီးပြန်လည်ထွက်ခွါကြသည်။
ပွဲတော်၌ဧည့်ခံကျွေးမွေးရန် အသင့်ပြုလုပ်ထားသော ရိုးရာစားဖွယ်သောက်ဖွယ်များ ခေါင်ရည်များကို ပွဲတော်လာပရိတ်သတ်များအား တည်ခင်းဧည့်ခံကျွေးမွေးကြသည်။ ကရင်ယဉ်ကျေးမှု လူငယ်မောင်မယ်များကလည်း ပရိတ်များအား ရိုးရာတေးသီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေပေးကြသည်။
ဖီ့ဗူးယော်ပူဇော်ပွဲကို ကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ရာ ကျေးလက်ဒေသများတွင် နှစ်သစ်ကူးနေ့ အခမ်းအနားနှင့်အတူ ယခင်က ယှဉ်တွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မှေးမှိန်လာကာ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဖြစ်နေပေသည်။ ကရင်ပြည်နယ် ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု တိုးတက်ဖြန့် ပွားရေးအသင်းသည် ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သော ဖီ့ဗူးယော်ပူဇော်ပွဲရိုးရာဓလေ့ကိုဖေါ်ထုတ်ထိမ်းသိမ်းမြှင့်တင်သောအားဖြင့် ဖါးအံမြို့ ပေါ်တွင်ကျင်းပသော ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့ ပွဲတော်များတွင် သရုပ်ပြပွဲအဖြစ် ကျင်းပပြသနိုင်ခဲ့သည်။အဆိုပါ သရုပ်ပြပွဲမှ ရိုက်ကူးထားသော မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများကို ရန်ကုန်မြို့တပ်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုက်တွင် အများပြည်သူလေ့လာနိုင်ရန် ချိတ်ဆွဲပြသထားသည်။
ကရင်အမျိုးသားတိုင်း မိမိတို့ ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို အမြတ်တနိုးဖေါ်ထုတ်ထိမ်းသိမ်း မြှင့်တင်နိုင်ကြပါစေ ဟူ၍ ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
Posted by ဒေါနမြေမှ အညတရ ခရီးသည် at 4:44 AM0comments Links to this post
လူမျိုးအသီးသီးတို့ သည် မိမိတို့ ၏ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝ၊ တောတောင်၊ ရေမြေ၊ ရာသီဥတု၊ သစ်ပင်ပန်းမန်၊နေ၊ လ၊ နက္ခတို့ ကို လေ့လာမှတ်သား၍၊ အချိန်ကာလ အပိုင်အးခြားတို့ခွဲခြားသိမြင်ကြသည်။
ကရင်လူမျိုးတို့ သည် ရှေးပဝေသဏီကစ၍ အချိန်အကန့် အသတ်ကို ကြည့်ပြီး၊ တစ်ရက်၊ တစ်လ၊ တစ်နှစ် ဟု သတ်မှတ်ကာ အမည်နာမပေးကြပါသည်။ မိမိတို့ ၏ ပထမလကို စကောကရင်ဘာသာဖြင့် “သလေ” ပိုးကရင်ဘာသာဖြင့် “ထိုက်ခေါက်ဖိုး”ဟု ခေါ်ကြပါသည်။
ထိုသို့တစ်နှစ်ဆန်းလျှင် မိမိတို့ဓလေ့ထုံးစံအရ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ ယစ်နတ်ပူဇော်ခြင်း၊ လူကြီးသူမများအား ကန်တော့ခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။
-ရေချိုးခေါင်းလျှော် စိတ်သန့် စင်
- လူကြီးသူမ ကန်တော့ကြ
ကရင်အမျိုးသားများသည် “သလေ”လ ၊ (ထိုက်ခေါက်ဖိုး)ကို ပထမလအဖြစ် သတ်မှတ်၍ လဆန်းတစ်ရက်နေ့ ကို နှစ်သစ်ကူးနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ “သလေ”လ ၊ (ထိုက်ခေါက်ဖိုး)လသည် မြန်မာအားဖြင့် “ပြာသိုလ”ဖြစ်၍ ပြာသိုလဆန်းတစ်ရက်နေ့ သည် “ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ သော်လည်း ရှေးအခါက ဤနေ့ ဤရက်ကို ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အဖြစ် မြေပြန့် ဒေသကရင်အချို့ နှင့် တောင်ပေါ်ကရင်အချို့ တို့ သည် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
သို့ ရာတွင် ကရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှစ်သစ်ကူးနေ့ ဖြစ်သော ဇန်န၀ါရီလ တစ်ရက်နေ့ ကို ကျင်းပသည့်နည်းတူ၊ ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်လည်း တန်ခူးလ (သင်္ကြန်)အပြီး နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ကို ကျင်းပကြပါသည်။
ထို့ အပြင် ကရင်လူမျိုး ဖိုးပိုက်ဆံဘာသာဝင်များသည် တပို့ တွဲလဆန်း (၄)ရက် နေ့ ကို၎င်း၊ ရသေ့ဘာသာဝင် ကရင်များကလည်း တပေါင်းလပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့ ကို၎င်း အသီးသီး ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ကို တကွဲတပြားဆီ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ထိုသို့နှစ်သစ်ကူးနေ့ ကို အကွဲကွဲအပြားပြား ကျင်းပကြသောကြောင့် စိတ်ဝမ်းကွဲမှုများလည်း ရှိနေကြပါသည်။ ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာ တီသံပြာ၊ ဦးလူနီ၊ ဒေါက်တာမြတ်စံ၊ ဦးစံလုံးနှင့် အခြားသော ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ ပါဝင်သော “ဒေါကလူ”ခေါ် ကရင်အမျိုးသားအသင်းကြီး၊ Karen National Association (KNA)၊ အသင်းကြီးကို (၁၈၈၁) ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းမှ မရှိသေးပေ။
ထိုအသင်းကြီးက “ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ”ကို တနေ့ တည်း ကျင်းပလျှင် ပို၍သင့်လျှော်ကြောင်း သိရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့် အောက်လွှတ်တော်အမတ်များအား တွေ့ဆုံစေပြီး၊ မည်သည့်နေ့ ရက်တွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ကျင်းပရန် သင့်လျှော်မည်ကို ရှေးအထောက်အထားများ၊ အကြောင်းအရာများကို စုံစမ်း၍ “ဒေါကလူ”အသင်းကြီးအား ပြန်လည်အစီရင်ခံစေသည်။
ထို့ကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အစီရင်ခံစာများ ပေးပို့ ကြသည်သာမက “ဆရာယာနီ”ဆိုသူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်တွေ့ ဆုံသည်။ “ဆရာယာနီ”သည် မြောင်းမြခရိုင်- တကူးဆိပ်ရွားသာညးဖြစ်၍ ဖါပွန်တွင် ကျောင်းဆရာအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ တောင်ပေါ်ကရင်ဒေသရှိ ကရင်အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော ပျဉ်ပြားပြက္ခဒိန်ကို ယူဆောင်လာ၍ တင်ပြသည်။ ထိုပျဉ်ပြားပြက္ခဒိန်တွင် တနှစ်လျှင် (၁၂)လ ပါရှိ၍ ပထမလမှာ ပြာသိုလဖြစ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားနှင့် တင်ပြပါသည်။
ထို့ အတူ “ဒေါကလူ”အသင်းကြီး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မန်းဘခင်မှလည်း နှစ်ပေါင်း (၇၀)ကျော်က စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ပိုးကရင်သင်ပုန်းကြီ်းနှင့် ဖတ်စာအုပ်ကို တင်ပြပါသည်။
အဆိုပါစာအုပ်တွင် တနှစ်လျှင် (၁၂)လ ပါရှိပြီး ပြာသိုလမှာ ပထမလ ဖြစ်ကြောင်း ဘိုးဘွားများလက်ထက်မှစ၍ ယနေ့ တိုင်အောင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ကို ပြာသိုလဆန်း (၁)ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပကြောင်း တင်ပြသွားပါသည်။
ထို့ ကြောင့် သမိုင်းဝင်နေ့ တနေ့ ရရှိရန် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အဖြစ် တင်သွင်းရာ၌ ပထမဦးစွာ အောက်လွှတ်တော်မှ စတင် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်၍ ကရင်အမတ် (၁၅)ဦး၏ ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်သော စောဂျွန်ဆင်ဒီဖိုးမင်း (Saw Joh Nson –D- P0min)သည် နေ့ ရက်သတ်မှတ်ရေးအတွက် တာဝန်ယူရသည်။ ထို့ကြောင့် စောဂျွန်ဆင်ဒီဖိုးမင်း သည် တောင်ငူမြို့ ရှိ ကရင်သက်ကြီးဝါရင့်သူတချို့ နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သရာမိုးလို (ကရင်အမျိုးသားအလံတော် ပုံစံတင်သွင်းရာတွင် ဒုတိယဆုရရှိသူ)အား ဆက်လက် တာဝန်လွှဲအပ်ခဲ့ကြသည်။
သရာမိုးလိုသည် ကရင်အမျိုးသားတို့ ၏ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်သည် နှစ်ပေါင်းမည်မျှရှိကြောင်းနှင့် ကရင်အမျိုးသားတို့ ၏ နှစ်သစ်ကူးနေ့ သည် မည်သည့်နေ့ ၊ လ၊တွင် ဖြစ်ကြောင်း ဟူသော အချက် နှစ်ချက်အပေါ် မူတည်၍ ရှာဖွေသုတေသနလုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်လည်တင်ပြခဲ့သည်။
အရှေ့ တိုင်းသုတေသနကြီးနှစ်ဦးဖြစ်သော ဂျီ၊ အိပ်ခ်ျ၊ လူစ့်(G.H.Luce)နှင့် ဂျီ၊ အီး၊ ဟာဗီ(G.E. Harvey)တို့ ၏ မှတ်တမ်းပြုချက်အရ၎င်း၊ အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား ရေးသားသော မြန်မာရာဇ၀င်အရ၎င်း၊ ကရင်လူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရှေးဦးစွာ ၀င်လာခဲ့ကြသည်မှာ ဘီ။ စီ ၇၃၉ ခုနှစ်က ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပေသည်။
သို့ ဖြစ်၍ သရာမိုးလိုက ကရင်သက္ကရာဇ်ကို ကရင်လူမျိုးတို့မြန်မာနိုင်သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည့် ထိုနှစ်မှ အစပြု၍ ရေတွက်ရန် အဆိုပြုခဲ့၏။ ယင်းအဆိုပြုချက်ကို အေ၊ ဒီ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် တင်သွင်းခဲ့ရာ၊ ကရင်လူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံသို့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည့် ဘီ၊ စီ ၇၃၉ ခုနှစ်မှ စ၍ ရေတွက်သော် နှစ်ပေါင်း (၂၆၇၅)နှစ် ရှိပြီးဖြစ်သည်။
တောင်ငူမြို့ ရှိ သက်ကြီးဝါကြီးများ၏ သဘောတူညီ သတ်မှတ်လိုက်သည့် နေ့ ရက် (သလေလဆန်း (၁)ရက်)ကို ဥပဒေပြုအောက်လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းအဆိုကို စောဂျွန်ဆင်ဒီဖိုးမင်း လက်မှတ်ထိုး၍ အောက်လွှတ်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့၏။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဥပဒေပြုအောက်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ချက်အရ (Presented)ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်လွှတ်တော်မှ ဆရာစံဘော် က ဆက်လက်ဦးဆောင်၍ ၀န်ကြီး စောဖေသာနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး၊ ဒေါက်တာ ဘမော်အစိုးရအဖွဲ့ သို့တင်ပြ၍ အစိုးရ၏ သဘောတူညီချက်အရ (Cabi-net Executive Pow – er)ဖြင့် ဘုရင်ခံထံသို့တင်ပြနိုင်၍ ဘုရင်ခံ၏ သဘောတူညီချက်ကြောင့် အစိုးရရုံးများနှင့် လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
စာချုပ်စာတမ်း အက်ဥပဒေ (Ne – G0tiable Instrument act.) အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် ရရှိခဲ့သည်။
အစိုးရ၏ ပထမဦးဆုံး အသိအမှတ်ပြု ရုံးပိတ်ရက်မှာ ၁၉၃၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁)ရက် (၁၂၉၉ ခုနှစ် ပြာသိုလဆန်း (၁)ရက်နေ့ ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းနေ့ တွင် ၀တ်လုံတော်ရ ဆစ်ဒနီလူနီက အသံလွှင့်မိန့် ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ပေါ်ထွက်လာသည့် “သာ့ပွာဖိုးလင်းတေး” ပြုစုရေးဆွဲခဲ့သည့် ကရင်အမျိုးသားပြက္ခဒိန်အရ၊ တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်၍ ၁၉၃၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့ တွင် ကျရောက်သည့် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ပွဲတော်တွင် ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး (၅)ဦး ဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာစံစီဖိုး၊ မန်းရွှေဘ၊ မန်းလှဖေ၊ စောဆစ်ဒနီလူနီနှင့် စောဖေသာတို့ က သြ၀ါဒ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ ခဲ့သည်။
(သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ သည့် နေ့ စွဲမှာ “သာ့ပွာဖိုးလင်းတေး”၏ ပြက္ခဒိန်အရ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် နှစ်ကြိမ်မျှ ကျရောက်ခြင်းကြောင့် ရက် အမှန် (၂၁ - ၁၂ - ၁၉၃၈) အစား (၂၁ - ၁၂ - ၁၉၃၉)ဟူ၍ ဖြစ်နေကြောင်း သတိပြုအပ်၏)
မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ယနေ့ကရင်အမျိုးသားထုတရပ်လုံးက သရာမိုလို၏ ရှာဖွေချမှတ်ပေးခဲ့သည့် ကရင်နှစ်သစ်ကူး နေ့ဖြစ်သော “သလေ”လဆန်း (၁)ရက်ဟု အတည်ပြုထားသော ပြာသိုလဆန်း (၁)ရက် သို့ မဟုတ် “ထိုင်ခေါက်ဖိုး”လဆန်း (၁)ရက် ကိုသာ ဆက်လက် အတည်ပြုလက်ခံနေကြကြောင်း တွေ့ ရှိပါသည်။
Posted by ဒေါနမြေမှ အညတရ ခရီးသည် at 4:36 AM0comments Links to this post
Posted by ဒေါနမြေမှ အညတရ ခရီးသည် at 4:15 AM0comments Links to this post
Posted by ဒေါနမြေမှ အညတရ ခရီးသည် at 3:45 AM0comments Links to this post
Posted by ဒေါနမြေမှ အညတရ ခရီးသည် at 5:04 AM0comments Links to this post